पहिरोपीडित अनबहादुलाई राप्रपा अध्यक्ष लोहनीको १५ हजार सहयोग
राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सहयोग गरेको रकम पहिरोपीडित अनबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गर्दै नयाँ पत्रिकाकर्मी उपेन्द्र खनाल ।
२०७७ श्रावण १८ आइतबार २१:५९:००
पहिरोमा परी एकैपरिवारका पाँच सदस्य गुमाएका रिसिङ गाउँपालिका– ८ भैंसिकिलीका अनबहादुर थापालाई राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । पीडित परिवारसम्बन्धी नयाँ पत्रिकामा आइतबार प्रकाशित समाचार पढेपछि सानै भए पनि सहयोग गर्ने कोसिस गरेको लोहनीले बताए ।
उनले पठाएको १५ हजार रुपैयाँ नयाँ पत्रिकाकर्मी उपेन्द्र खनालले अनबहादुरलाई आइतबारै हस्तान्तरण गरेका छन् । परिवार गुमाएर पीडामा रहेको अवस्थामा टाढाबाट समेत आर्थिक सहयोग भएकोमा राहत महसुस गरेको उनले बताए । ‘पीडामा परेको वेलामा उहाँहरूले सहयोग र सान्त्वना दिएर गर्नुभएको सहयोगप्रति आभारी छु,’ उनले भने । आइतबार हजुरबुबालाई ७ वर्षीया नातिनीको प्रश्न मम्मीबाबा खोइ ?’ भन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको थियो । २९ असारमा गएको पहिरोमा परी अनबहादुरका दुई छोरा दुई बुहारी र नातिनी गरी पाँचजनाका ज्यान गएको थियो ।
#रिसिङ गाउँपालिका # पहिरोपीडित
सिन्धुपाल्चोक पहिरोपीडितको पीडा : शव छोप्ने कपडा र ओत लाग्न त्रिपालसमेत छैन
गुल्मीका पहिरोपीडितलाई सहयोग